कपाल फुलेर सेताम्मे भएको भक्तबहादुरको टाउकोमाथि नाम्लोको डाम:समय फेरियो , फेरिएन भरियाको जीवन – AB Sansar
December 18, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on कपाल फुलेर सेताम्मे भएको भक्तबहादुरको टाउकोमाथि नाम्लोको डाम:समय फेरियो , फेरिएन भरियाको जीवन
ताप्लेजुङ, ३ पुस- कपाल फुलेर सेताम्मे भएको भक्तबहादुरको टाउकोमाथि नाम्लोको डाम देखिन्छ । फाटेर प्वालैप्वाल भएका कपडा र प्लाष्टिकको डोरीले सिएको प्लाष्टिककै चप्पल लगाएर कहिले भरिएको त कहिले रित्तो ढाकर भिरेर तोक्माको साथमा हिँडिरहेका देखिन्छन्, भक्तबहादुर । उहाँलाई कसैले भक्तबहादुर नाम लिएर बोलाउँदैनन् भने उहाँको नामले प्राय कसैले चिन्दैनन् पनि । बाटोमा भेट्ने कतिपयले ट्रक भनेर बोलाउँदा हाँस्दै बोल्ने भक्तबहादुरलाई नजिकै गएर तपाईको खास नाम के हो ? भनेर हामीले सोध्यौँ । उहाँले हाँस्दै जवाफ दिनुभयो–ट्रक ।
“खासै केहि गरिएन, दुई जना छोरा र चार बहिनी छोरी छन्, माइली अहिले कक्षा ११ मा पढ्दै छ, उसैलाई पढ्ने खर्च चाहिन्छ, घरमा खान लाउन चाहिन्छ, कमाएको पैसा त्यतिकैमा सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । करिब ५० वर्ष बढी भारी बोकेर धेरै सम्पत्ति नजोडे पनि घरपरिवार पाल्न सकेकामा भने आफूलाई सफल ठान्नुहुन्छ, भक्तबहादुर । गाउँगाउँमा यातायात पुगेसँगै पहिले जस्तो नियमित भारी बोक्ने काम कमै पाइन्छ ।
करिब सात÷आठ वर्षअघिसम्म पाँचथरको थर्पुदेखि ताप्लेजुङको गाउँगाउँसम्म भरियाको लाइन देखिन्थ्यो । अहिले गाउँमै सवारी साधन पुग्ने र कतै खच्चडले भारी बोक्न थालेपछि भरिया विस्थापित जस्तै बनेका छन् । कहिलेकाहीँ अलँैची ओसार्ने, साहुकोबाट कुनै घरसम्म चामललगायत सामान ओसार्ने जस्ता काम पाउने गरेको भक्तबहादुरले बताउनुभयो । उहाँजस्तै अरु थुप्रै भरियाले आजकल काम पाउन छाडेका छन् । सामान्य काम पाउने गरे पनि पछिल्लो समयमा सङ्क्रमणका कारण लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीले पनि भरियालाई समस्या छ । (रासस)
फुपुको घर गएका उमेश हराएपछि आमा रुँदै छोराको खोजीमा निस्किन् (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
बेहुलाबेहलुी जन्ती चढेको गाडी दु’र्घ’टना, बेहुला बेहुलीसहित १३ जना ….
फेरि अर्को घिनलाग्दो हर्कत; १३ बर्से बालिकालाई ४ जनाले पालैपालो… (भिडियो)